मुक्तक मञ्च पोखरामा प्राञ्जल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अशोज ४ गते, २०७४ - १३:५९
पोखरा । मुक्तक मञ्च पोखराको अध्यक्षमा प्राञ्जल सर्वसम्मत रुपमा चयनभएका छन् । मञ्चको छैटौँ अधिवेशबाट ९ सदस्यी कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो ।
मञ्चको उपाध्यक्षमा भरतराज पौडेल, सचिवमा रामजीप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्षमा गौरी तमु र सहसचिवमा रोशन ‘तल्कोटे’ चयन हुनुभएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा के. आर. ढकाल, भरत पोखरेल, अनिता दाहाल र शशी अधिकारी ‘सकिला’ रहेका छन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि प्राञ्जलले आफ्नो कार्यकालमा मुक्तक उत्सव, मुक्तक सञ्चयन प्रकाशन, मुक्तकसम्बन्धी अन्य संस्थासँग सहकार्यलगायतका कार्यव्रmम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । गुल्मीका स्थायी वासिन्दा रही करिब १ दशकदेखि पोखरामा रहेर साहित्य साधनामा लागिपरेका प्राञ्जल यसअघि मञ्चका उपाध्यक्ष थिए ।
अशोज ४ गते, २०७४ - १३:५९ मा प्रकाशित